AppsExpo 2013 ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့နှင့် ၆ရက်နေ့များ အတွင်း MICTDC (Myanmar ICT park) မှာ ၂ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
AppsExpo ဆိုတာ နည်းပညာနယ်ပယ်မှာရှိနေတဲ့ အသုံးချ software application တွေကို ထုတ်လုပ်သူ၊ ဖန်တီးသူ၊ တင်သွင်းရောင်းချသူနဲ့ သင်တန်းများပို့ချသူတွေ စုစည်းပြသမည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ဘ၀မှာလိုအပ်နေတဲ့ နည်းပညာအသုံးချမှုတွေအတွက် အရေးပါလှတဲ့ application တွေကို တနေရာထဲမှာ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့်လေ့လာ နိုင်ဖို့ AppsExpo ကို စိတ်ကူးမိတာဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးတက်လာတဲ့ ကွန်ပျုတာအသုံးပြုသူတွေ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံး ပြုနေ သူတွေအတွက် လက်တွေ့အသုံး ချနိုင်မယ့် လူမှု၊ စီးပွား ဆိုင်ရာ Application များဖြစ်ပေါ်တိုး တက်နေ ပုံတွေ၊ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ application တွေ၊ စီးပွားရေးနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံး commercial software application များဖန်တီးထုတ်လုပ် ပေးနေ သူတွေ၊ နည်းပညာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးချ နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေ ကိုတနေရာထဲမှာ စုံစုံ လင်လင်လေ့လာနိုင်ဖို့အပြင် apps တင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး သူအများစု ပါဝင်ပြသကြမယ့် ပထမဦးဆုံးသောပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲ အတွင်းမှာ လက်တွေ့သရုပ်ပြ ဂိမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ software ရေးဆွဲခြင်းစတဲ့ ထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်မှုများလဲ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နည်းပညာ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ အသိအမြင်ဗဟုသုတများရရှိစေဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
AppsExpo က မြန်မာ့ software ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ပိုမိုဖြစ်ထွန်း လာ တဲ့ ဈေးကွက်အတွင်း အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များတိုးတက်လာစေဖို့သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍတွေအတွက် application များရဲ့ထိရောက်တဲ့ စွမ်း ဆောင်ရည်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကို ပြည်သူလူထုက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိစေဖို့သော်လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်အတွင်းအရည်အသွေးရှိတဲ့ မြန်မာ့ application သစ်များ ဈေးကွက်ရရှိရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း ရည် ရွယ်ချက်ကောင်းများဖြင့် လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်တစ်ခု ကိုဖြည့်ဆည်း ပေး နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ဆောင် ရွက်ခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။ ဈေးရောင်းပွဲတော် သက်သက်မဟုတ်ဘဲ နည်းပညာ ဆိုင်ရာလေ့လာလိုသူများ အတွက် တမူထူးခြားတဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ ပြပွဲတစ်ပွဲအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါသောကြောင့်
၁။ Mobile Apps များအားတီထွင်ထုတ်လုပ်သူများ
၂။ Mobile and other software development သင်တန်းကျောင်းများ
၃။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသော Software developing Co, Ltd များ၊ နိုင်ငံတကာမှ Software များအားတင်သွင်းရောင်းချသူများ နှင့် သီးခြားပါဝင်လိုသော Mobile or software developer များ အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စား စွာဖြင့်ပူးပေါင်းပါ ၀င်ပြသကြဖို့ လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက YangonHeartz Media & Business No.9/4A, Kyaikasan Pagoda Road, Thingangyun Township, Yangon.(Phone: 0943042646) ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
We are planning to the exhibit of application exhibition named “AppExpo 2013”avery first time in Myanmar will be held at MICTDC ( Myanmar Information & Communication Development Corporation) on5and6February 2013.
The AppExpo is the tech exhibition of gathering from industries like software houses, developers, software importers and solution trainers. Especially going to introduce them who new face and small software houses and freelance developers and their products. Also find to the way for more participate to each other on the future.
We have got an idea for this exhibition, how application software impact today lifestyle. And able to learn about that on one stop place and gathering around.
This is the first exhibition about application software, mobile application, programming & software training, commercial software application creators, web and app developers can show their products all together. Attendee can learn about that simulation, presentation and new products and marketed products. We hope that may get more knowledge for software industry promotion and understanding. We hope that may effect to education sector too.
And we are sure that is filling the blank that is needed in Myanmar’s ICT sector. Then we want to invite
1. Mobile Apps makers and providers
2. Mobile and apply software development training centers
3. Local & regional Software developing Co,Ltd, they who import software from other country
So, facts are kindly welcome to display and participate to our AppExpo.
Want to know more detail, please contact following address.
YangonHeartz Media & Business No.9/4A, Kyaikasan Pagoda Road, Thingangyun Township, Yangon.
Phone : 0943042646,
Labels: appexpo news သတင်း